Devuan Gnu + Linux yatove ne beta 2 | Linux Vakapindwa muropa
Devuan Gnu + Linux yatove ne beta 2
Iyo forogo inozivikanwa yeDebian, Devuan Gnu + Linux yatove ne beta 2 zviri pamutemo, beta inoenderera mberi yakafanana neprojekiti yepamutemo asi ichichengetedza huzivi hwayo.
Devuan Gnu + Linux inozivikanwa ne hauna Systemd Init pane yako yekushandisa system, iyo inoshandura zvachose bhuti reDebian neese software inoenderana. Pane izvi, Devuan atangisa yazvino beta vhezheni yeiyo inotevera vhezheni zvekuparadzirwa uku kwakasiyana.
Iyi beta 2 ichateverwa mumiriri wekuburitsa uyo anotarisirwa kuwanikwa kune wese munhu muna 2017 pamwe neiyo yekupedzisira vhezheni yeiyi vhezheni yeiyi yakasarudzika Debian forogo.
Devuan Gnu + Linux haichengete mazita eDebian vhezheni
Kukura kweDevuan kunoteedzera iwo iwo misimboti saDebian, asi haiteedzere mazita eshanduro. Saka, iyo yakagadzika vhezheni inonzi Jessie, asi iyo isina kugadzikana vhezheni inonzi Ceres uye iyo vhezheni yekuedza inonzi Ascii.
Kana iwe uri mudiwa weDebian uye uchida kuve neyako yekushandisa system isina Systemd, unogona kupfuura peji yepamutemo uko kwausingazowana chete beta 2 vhezheni yaDevuan Gnu + Linux asi iwe unozowanawo yakagadzikana vhezheni yaDevuan Jessie, vhezheni yakagadzirira kushandisa pamakomputa edu. Kana, kune rumwe rutivi, iwe uchida kuyedza iyi beta vhezheni, kunyangwe uri beta isu tinokurudzira kuti iwe unoshandisa chaiwo muchina kuyedza iyi vhezheni sezvo zvisina kuve nechokwadi kuti hapasati paine matambudziko akakomba mushanduro.
Ichokwadi ndechekuti ini handina kuyedza Devuan Gnu + Linux uye kunyangwe ichiti ndiyo imwe yenzvimbo dzinonakidza kwazvo munyika yeGnu, chokwadi ndechekuti ndinofunga kuti pachinzvimbo chekugadzira vhezheni izere, timu inofanirwa vane hunyanzvi mukugadzira chirongwa kana chishandiso chinobvisa Systemd uye isa imwe nzira, chimwe chinhu chinonakidza pane kutanga kugovera kutsva Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Devuan Gnu + Linux yatove ne beta 2
zano rako rinoshanda kwazvo »timu rinofanirwa kuve nehunyanzvi mukugadzira chirongwa kana chishandiso chinobvisa Systemd uye chichiisa imwe, chimwe chinhu chinonakidza pane kutanga kugovera kutsva, haufunge?»
Yekutanga yakavhurwa sosi RISC-V inouya kuArduino
Iyo yekutanga beta yeLinux Mint 18.1 Cinnamon ikozvino yavapo